Sorry for Your Loss (2018) | MM Movie Store
မကွာသေးခငျကမှ ကလေးအဖေ ဖွဈလာတဲ့ဖခငျအသဈလေး ကနျ တဈယောကျ ကလေး ဘယျလိုထိနျးရမယျဆိုတာ သဘောမပေါကျသေးသလို ညစာလဲ ငတျနပေါသေးတယျဒါကတော့ ကလေးရှိတဲ့ မိဘ တိုငျး ညစာ ငတျတာပါပဲ 😛
စိတျဒုက်ခတှေ ရော အနှောကျအယှကျတှရေောဝငျပွီးတဲ့ နောကျ တဈရကျမှာတော့ မထငျမှတျထားတဲ့နရောက ဖုနျးတဈခုဝငျလာပါတယျကနျ ရဲ့ အမေ ဆီက ဖွဈပွီး ကနျ ငယျငယျထဲက ထှကျသှားတဲ့သူ့ အဖေ ဆုံးသှားပွီ ဖွဈကွောငျး ပွောပွခဲ့ပါတယျ…ကနျ အတှကျကတော့ ဘာမှ မခံစားရသလိုပဲ သူ့အလုပျသူ ဆကျလုပျနပေါတယျ….
အသုဘ သှားရငျကောငျးမလား လို့ မိနျးမဖွဈသူကိုသှားမေးတော့ ရှငျ့ အဖေ မဟုတျဘူးလား ဆိုပွီးမဆီမဆိုငျ မိနျးမ က ဝမျးနညျးပွီး ငိုပါလေ ရောဒါနဲ့ ကနျ တဈယောကျ မခဈြတဲ့ အဖေ ရဲ့အသုဘ ကို အမေ နဲ့ အတူ ရောကျသှားတယျ ဆိုပါတော့
ကနျ အတှကျ ကံ ကောငျးတာက တော့သူ့အဖေ က တဈဦးထဲသော သားအတှကျ အမှေ ခနျြထားပေးခဲ့ပါတယျအဲ့ဒီ အမှကေ ကနျ အတှကျ နတျရတှေငျးပါပဲ သူ့လုပျငနျးတဈခုတညျထောငျနိုငျတဲ့အထိ ရရှိမှာပါ…
ဒါပမေဲ့ ထူးထူးဆနျးဆနျး အမှေ ရယူဖို့ အတှကျသူ့အဖေ ခိုငျးတဲ့ ကိစ်စ ကလဲ ရှိနပွေနျပါတယျအဲ့ဒီ ကိစ်စ အောငျမွငျမှ အမှရေမှာပါအခြိနျကလဲ ရကျပိုငျးအတှငျးပဲ ပေးထားပါတယျသူ့အဖေ ဂေါကျတောကျတောကျ စီမံ ခဲ့တဲ့အမှေ စာခြုပျ ကွောငျ့ ကနျ တဈယောကျဘာတှေ သောကျတလှဲ လုပျရမယျဆိုတာ Fan မြား ဆကျကွညျ့ရှုလိုကျကွပါအုံး…
စကားလုံး အသုံးအနှုနျးမြား ရိုငျးပွတဲ့အတှကျမိသားစု နဲ့ အတူ ကွညျ့ရှုလို့ အဆငျမပွပေါ
မကြာသေးခင်ကမှ ကလေးအဖေ ဖြစ်လာတဲ့ဖခင်အသစ်လေး ကန် တစ်ယောက် ကလေး ဘယ်လိုထိန်းရမယ်ဆိုတာ သဘောမပေါက်သေးသလို ညစာလဲ ငတ်နေပါသေးတယ်ဒါကတော့ ကလေးရှိတဲ့ မိဘ တိုင်း ညစာ ငတ်တာပါပဲ 😛
စိတ်ဒုက္ခတွေ ရော အနှောက်အယှက်တွေရောဝင်ပြီးတဲ့ နောက် တစ်ရက်မှာတော့ မထင်မှတ်ထားတဲ့နေရာက ဖုန်းတစ်ခုဝင်လာပါတယ်ကန် ရဲ့ အမေ ဆီက ဖြစ်ပြီး ကန် ငယ်ငယ်ထဲက ထွက်သွားတဲ့သူ့ အဖေ ဆုံးသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်…ကန် အတွက်ကတော့ ဘာမှ မခံစားရသလိုပဲ သူ့အလုပ်သူ ဆက်လုပ်နေပါတယ်….
အသုဘ သွားရင်ကောင်းမလား လို့ မိန်းမဖြစ်သူကိုသွားမေးတော့ ရှင့် အဖေ မဟုတ်ဘူးလား ဆိုပြီးမဆီမဆိုင် မိန်းမ က ဝမ်းနည်းပြီး ငိုပါလေ ရောဒါနဲ့ ကန် တစ်ယောက် မချစ်တဲ့ အဖေ ရဲ့အသုဘ ကို အမေ နဲ့ အတူ ရောက်သွားတယ် ဆိုပါတော့
ကန် အတွက် ကံ ကောင်းတာက တော့သူ့အဖေ က တစ်ဦးထဲသော သားအတွက် အမွေ ချန်ထားပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ အမွေက ကန် အတွက် နတ်ရေတွင်းပါပဲ သူ့လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ထောင်နိုင်တဲ့အထိ ရရှိမှာပါ…
ဒါပေမဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အမွေ ရယူဖို့ အတွက်သူ့အဖေ ခိုင်းတဲ့ ကိစ္စ ကလဲ ရှိနေပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီ ကိစ္စ အောင်မြင်မှ အမွေရမှာပါအချိန်ကလဲ ရက်ပိုင်းအတွင်းပဲ ပေးထားပါတယ်သူ့အဖေ ဂေါက်တောက်တောက် စီမံ ခဲ့တဲ့အမွေ စာချုပ် ကြောင့် ကန် တစ်ယောက်ဘာတွေ သောက်တလွဲ လုပ်ရမယ်ဆိုတာ Fan များ ဆက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါအုံး…
စကားလုံး အသုံးအနှုန်းများ ရိုင်းပြတဲ့အတွက်မိသားစု နဲ့ အတူ ကြည့်ရှုလို့ အဆင်မပြေပါ